Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia Seyoum Mesfin iyo saraakiil kale oo la dilay - Hargeele - Wararka Somali State
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia Seyoum Mesfin iyo saraakiil kale oo la dilay
Addis Ababa (SONNA)- Dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dileen mas’uuliyiin sare oo ka tirsan kooxda TPLF, oo dhawaanahanba ay daba joogtay, ka dib markiiay diideen inay si nabadgalyo ah isku dhiibaan.
Ragga la dilay waxaa ku jira Seyoum Mesfin oo muddo dheer Ethiopia ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda, kana soo jeeda qawmiyadda Tigrey, Abay Tsehaye iyo laba sargaal oo kale, kuwaas oo ka mid ahaa madaxda kooxdan oo dhawaan looga adkaaday dagaal toos ah oo ay dawladda Ethiopia la galeen dhammaadkii 2020-ka.
Seyoum Mesfin waxa uu ka mid ahaa raggii udub dhexaadka u ahaa maamulkii Males Zanawi, isagoo 1991-dii ilaa 2010-kii ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dalkaas, waxaana uu noqday gudoomiyaha ergada gaarka ah ee IGAD u qaabilsan South Sudan, isagoo dhinaca kalena aad ugu lug lahaa ciidamada Ethiopia ee Muqdisho soo galay dhammaadkii 2006-dii.
Mesfin waxa uu noqday safiirka Ethiopia u fadhiya China markii laga qaaday wasiirka arrimaha dibadda, waxaana uu sanadihii dambe aad uga soo horjeeday maamulka Abiyi Axmed, sida uu ku sheegay waraysiyo laga qaaday.
Fabinho oo ka hadlay wararka la xiriira in Mohamed Salah uu ka tagayo kooxda Liverpool
Puntalnd: Dhaqaatiir loo diray gobolka Sool
Danjire Abuukar Baale: Waxaan ku bogaadinayaa Golaha Amaanka ee QM diidmada qaraarka tirsigiisu yahay 1267
Ciidamada Danab oo kooxda Al-Shabaab ka saaray Kunturwaareey